बढेको ३ प्रतिशत भ्याट घटाउने माग सरकारले सुन्दै सुन्दैन : अञ्जन श्रेष्ठ [भिडियो वार्ता]
२०७६ असोज ५ आइतबार
अञ्जन श्रेष्ठ | २०७६ जेठ २७ सोमबार | Monday, June 10, 2019 १६:४६:०० मा प्रकाशित
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष विकास खर्चको अनुपात बढाउँदै आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित आगामी आव २०७६/०७७ बजेट संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। बजेटमार्फत् सरकारले करका दरमा खासै परिर्वतन गरेको छैन। तर, दायरा भने बढाउने लक्ष्य अगाडि सारेको छ।
बजेटसँगै उत्साही भएको निजी क्षेत्र भने बजेटसँगै आएका नियम कानुनपछि भने फेरि शंसशित भएका छन्। यही परिवेशमा नेपालका उद्योगी/व्यवसायीको भविष्य, करको दर, अटो मोबाइल्स व्यवसायका चुनौती र विद्युतीय सवारीका विषयमा लक्ष्मी ग्रुपका निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठसँग नेपाल लाइभका उत्तम काप्रीले गरेको कुराकानी:
निजी क्षेत्रको व्यापार/व्यवसाय कसरी अघि बढ्दै छ?
निजी क्षेत्रका व्यापार व्यवसायमा केही चुनौती अवश्यै छन्। सरकारले ती चुनौती कम गर्न सहजीकरण गर्नु नै सबैभन्दा आवश्यक छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रप्रति सरकारले गर्ने व्यवहार परिवर्तन गर्नु महत्वपूर्ण विषय हो।
सबैभन्दा पहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको उद्योग समितिको सभापतिको हैसियतमा मैले भन्नुपर्दा उद्योग सरकारलाई उद्योग चाहिएको हो कि होइन भन्ने कुरामा 'क्लियर' हुन आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ भुत्तानी असन्तुलनका कुरा पनि गरिरहेको छौं। विगत केही वर्षदेखि भुक्तानी असन्तुलनका चुनौती बढ्दै गएका कुरा गरिरहेका छौं। हामीले चिन्ता मात्रै गरिरहेका छौं। तर, यसका लागि हामीले के गरिरहेका छौं त भन्ने प्रश्न ठुलो हो।
भुक्तानी असन्तुलनका समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ त? कि त हामीले खपत घटाउनु पर्‍यो। कि खाना कम खाने वा आयात कम गर्ने हो। कि त यहीँको उत्पादन बढाउने हो। हामी कृषिप्रधान देश केही समयअघिसम्म कृषि उपज निर्यात गर्थ्यौं। तर त्यही कृषि उपजको पनि आयात बढ्दो छ।
सरकारले अहिले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। २०४८ सालमा नेपालमा खुला बजार अर्थतन्त्र लागू भएपछि आजसम्म आइपुग्दा अझै पनि हामी उद्योगीले अनुदान मागेको होइन। हामीले त उद्योगमा प्रतिस्पर्धी हुने सक्ने आधार मागेका हौं।
उद्योगीका संस्थागत मागका विषयमा सरकारले गम्भीर भएर हेरिदिनु पर्छ।
माग हेरेर समाधान गरिदिने हो भने नेपाल निश्चिय पनि औधोगिकीकरणमा अघि बढ्छ।
हाम्रो खुला 'बोर्डर' छ। हामीकहाँ भ्याट १३ प्रतिशत छ। भारतजस्तो असमान करको दर भएको देशले त आज सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर समान कर बनाइसकेको छ। तर, हामीकहाँ भने अझै पनि सबै वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने गरेको छ।
व्यवसायीले त 'मल्टिपल भ्याट' लगाइदेउ भनेर माग पनि गरेका हौं। अहिलेसम्म राज्यले सुनेको छैन।
केही वस्तु व्यापार प्रतिस्पर्धी छैन। जस्तै खाद्य प्रोसेसिङलगायतका वस्तुको व्यापार प्रतिस्पर्धी छैन। यी वस्तुमा हामीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न असहज भयो। त्यसैले भ्याट कम गरिदेउ भनेका छौं। तर, सरकारले सुन्दै सुन्दैन।
पहिले १० प्रतिशत भ्याट थियो। सरकारले त्यसलाई शान्तिसुरक्षाको नाममा थप ३ प्रतिशत जोडेर १३ प्रतिशत लिने निर्णय गरेको हो। शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न भनेर थप गरिएको कर अझै पनि किन हटाउँदैन त सरकार? अब त ढिला भइसकेको छ। तर पनि किन हट्दैन?
हामीले यो विषय आफ्नै नाफा बढाउनका लागि व्यवसायीले उठाइरहेका छैनौं। यो त हामीले प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि हो।
बजेटले केही माग त सम्बोधन गरेको छ भन्छन् नि?
बजेटले केही विषयमा सम्बोधन गर्न खोजेको छ। यसका लागि हामीले सरकारलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। सरकारले संकटमा पर्न लागेको कपडा उद्योगीलाई विद्युत महसुल र ब्याजदरमा केही अनुदान दिएको छ। यो स्वागतयोग्य कुरा हो। यसकारण नै अब स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन भएका कपडा उद्योग प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छन्।
कपडा उद्योगसँगै सरकारले संकटमा परेका अन्य उद्योगका विषयमा पनि कसरी समाधान खोज्ने भने विषयमा जानुपर्‍यो। तर, त्यो हुन सकेको छैन।
जस्तै हिजोका दिनमा सिमेन्ट उद्योगलाई केही सहुलियत दिँदा आज सिमेन्टमा देश आत्मनिर्भरको बाटोमा पुगेको छ।
सरकारले जहिले पनि अनुदान तथा सहुलियत दिँदा यस्तै गरी छनोट गर्नुपर्छ। हामी अझै पनि भन्छौं, पहिले पनि भनेका हौं। आफैं सक्षम भएको उद्योगमा विदेशी लगानी चाहिँदैन।
अहिले हामीलाई चाहिएको लगानी पूर्वाधार विकासमा नै हो।
यो क्षेत्रमा हामीलाई ठुलो लगानी चाहिएको छ। जुन हामीबाट सम्भव छैनन्।
करका विषयमा किन सँधै व्यवसायी र सरकारबीच मतभेद आइरहन्छ?
सरकारले हामी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिर्वतन गर्न आवश्यक छ। कानुन सबैले मान्नुपर्छ। कानुनभन्दा बाहिर कोही पनि जान सक्दैन। हामी व्यवसायी पनि जादैनौं। जान पनि हुन्न। भुलबस कहिलेकाँही कमी कमजोरी भएको अवस्थामा यी अपराधी नै हुन् जस्तो गरिने व्यावहरमा परिर्वतन आवश्यक छ।
नीतिनियम बनाइएको दुःख दिनका लागि त पक्कै होइन होला? नीतिनियम त सहजताका लागि बनाइएका हुन् भन्ने मेरो बुझाइ हो। व्यवसायीले पनि खुसीका साथ कर तिर्ने वातावरण बन्नुपर्छ। यो हिसाबले पनि कानुन बनाइनु पर्‍यो नि!
प्रक्रियागत जटिलता ल्याएउनले काम गर्नु हुँदैन। करका प्रावधान पनि सरल र सहज हुनपर्छ। निश्चय पनि हामी व्यवसायीले राज्यको नियमअनुसार त व्यापार व्यवसाय गरेपछि कर त तिर्नैपर्छ। हामी पनि तयार छौं। त्यही भएर हामीले सरल र सहज हुन पर्छ भनेका हौं।
मुख्य कुरा त व्यवसायीलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण परिर्वतन हुन आवश्यक छ। कर्मचारीले हेर्ने दृष्टिकोणसँगै समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा नै परिर्वतन आवश्यक छ। यो देशमा हामी व्यवसायीको पनि योगदान छ।
हामीले पनि सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि योगदान गरेका छौं। अरु सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारी बहन गरेका छन् भने हामी व्यवसायीले पनि यो मुलुकका लागि दायित्व बहन गरेका छौं।
कुरा के हो भने, हामी व्यवसायीको प्रतिफल भनेको नाफा हो। नाफालाई कहिल्यै पनि गलत रूपमा व्याख्या गर्नु हुँदैन। जहाँ नाफा छ, त्यहीँ व्यवसायी हुन्छ। त्यसका कुनै द्विविधा नै छैन। द्विविधामा रहनु पनि पर्दैन। व्यवसायी नाफासँग नै छ। हामी व्यवसायीको प्रतिफल नै त्यही हो। नाफालाई उचित र अनुचितका कसीबाट हेरिदिनु हुँदैन।
तपाईंको त अटो-व्यवसायसँग झन् बढी सम्बन्ध छ। कस्तो छ अहिले अटोमोबाइल्सको व्यापार?
लक्ष्मी ग्रुपले अटो-मोबाइल्सका क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आएको छ। त्यसमा पनि नेपाली बजारमा लोपप्रिय भइसकेको हुन्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता पनि यही ग्रुप हो।
अहिलेको अवस्थामा अटो व्यवसाय क्रमशः घट्दो छ।
यो क्षेत्र अघिल्लो मौद्रिक नीतिपछि मध्यवार्षिक समीक्षाभन्दा अगाडि तथा यो वर्षको दशैंतिहार पछि व्यवसाय खस्कँदो छ।
राष्ट्र बैंकले अटो क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि निरुत्साहित गर्ने गरी जुन प्रावधान ल्याइदिएको थियो, यसले यो क्षेत्रमा समस्या थपिएको छ। ६५ प्रतिशतसम्म अटो लोन जारी हुने अवस्थालाई राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले ५० प्रतिशतमा झारेपछि यो क्षेत्रमा समस्या आएको हो।
अहिले सबै व्यवसायीसँग स्टक बढेको छ। बिक्री हुन सकेको छैन। यो क्षेत्रमा गतवर्षको हिसाबले हेर्ने हो भने ३० प्रतिशतले व्यापार कम भएको छ।
पहिलो कुरा त व्यवसाय गर्न लोन पाउन सक्ने अवस्था छैन। बैंकहरु लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा छन्।
यी विषयसँगै हामीले सवारी कर्जा, सवारीको गुणस्तर, विद्युतीय गाडीको सम्भावनालगायतका विषयमा श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको विस्तृत अंश भिडियोमा:
भिडियो र तस्बिर–निमेशजंग राई
विकास समितिमा सिसडोल र बन्चरेडाँडाका जनप्रतिनिधि, भन्छन्- फोहोर फाल्न दिँदैनौं
विकास दुगड ‘प्रबल जनसेवा श्री’बाट सम्मानित
तीन कृति एकसाथ सार्वजनिक
९२ हजारले अवलोकन गरे स्टक क्लियरेन्स मेला, व्यवसायी उत्साहित
कागज मिलाउनेलाई होइन, काम गर्नेलाई योजना दिनुस् : मन्त्री अर्याल
विदेशमा श्रम स्वीकृति लिँदा अब अनलाइनबाटै बिमाशुल्क बुझाउन सकिने
भूटानसँगको लज्जास्पद हारपछि प्रशिक्षक भन्छन्- मैले सिकाएअनुसार खेलेनन्, पानी पनि पर्‍यो
अदालत परिसरबाट हत्कडीसहित एक अभियुक्त फरार
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन: पपुलिस्ट होइन, दिगो काम गर्नुस्
समयमा काम नगर्ने ठेकेदारका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री महासेठबीच जुहारी
सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई पेन्सन अनिवार्य : कपिलमणि ज्ञवाली [अन्तर्वार्ता]
मंसिर १४ मा कहाँ-कहाँ हुँदैछ उपनिर्वाचन?
भीरबाट खसालेर गाईगोरु मारेको अभियोगमा पक्राउ परेका ७ जनालाई अनुसन्धानका लागि एक हप्ताको म्याद
जोखिममा नेपालको बैंकिङ प्रणाली, ‘स्विफ्ट ह्याक’सँगै ‘एटिएम ह्याक’को चुनौती
हामीले प्रयोग गर्ने एटिएम कति सुरक्षित?
गोंगबु बसपार्क प्रकरण-७ : ल्होत्सेले बनाएका संरचना यसकारण अवैधानिक
इयूको गम्भीर चासोपछि हेलिकोप्टर कम्पनीको उडान सुरक्षा मूल्यांकन सुरु
भाइ मृत्युको रहस्य पत्ता नलाग्दै दाजुको हत्या
जनकपुरका रन्जितले गरे कालापत्थरसम्मको साइकल यात्रा [फोटो फिचर]
राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि 'योगदानमूलक निवृत्तिभरण योजना' सुरु
कोरियामा एक महिनादेखि अलपत्र परेका ५ नेपाली स्वदेश फर्किए
प्रहरीले बोक्ने अत्याधुनिक पेस्तोल कहाँबाट ल्याएका थिए लुटेराले?
हिरासतमै पक्राउ पूर्जी थमाउँदै ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि अभद्र व्यवहार मुद्दामा अनुसन्धान सुरु
१७ पासपोर्टसहित समातिएका गाम्बियनको अपराधस्थल नेपाल
सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित आयोगमा मैले भनेकै व्यक्ति ल्याउन प्रधानमन्त्री सहमत : प्रचण्ड
नक्कली भ्याट बिल प्रकरण : भाटभटेनीसहित ४ कम्पनीविरुद्धको मुद्दाको पुनः अन्तिम सुनुवाइ हुँदै
भित्री कथा : न बेच्नेको इच्छा न किन्नेको, बीचमा अड्किएका नेमार
प्रदेश २ : नेकपा जिल्ला कमिटी विवाद उत्कर्षमा, माधव नेपाल र मातृका यादवलाई कारबाहीको माग
नेपालमा परिवार नियोजनको नयाँ साधन 'सायना प्रेस' भित्रियो, नवलपुर र सिन्धुलीबाट सेवा सुरु
विश्वका ठूला कार उत्पादकको इलेक्ट्रिक सवारी मोह : कारदेखि ठूला बस हुँदै अब स्कुटर र बाइक
गृहमन्त्रीका भाइसहित ८ जनाको थुनछेक बहस हेर्दाहेर्दैमा, भोलि पुन: सुनुवाइ हुने
तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमणपछि उत्पादनमा आधा कमी आउने : साउदी अरब
सन् २०३० को फिफा विश्वकप संयुक्त रुपमा आयोजना गर्न कोलम्बियाको प्रस्ताव
रामारोशन गाउँपालिका अध्यक्षलाई लक्षित गरी गोली प्रहार
अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै इटहरीका मेयर चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर
४१ लाखको चेक र १३ लाख नगदसहित एक जना पक्राउ